MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 826
>Than Soe Hlaing – Nargis Reporter Story -4
> သတင်းထောက်တဦး၏ နာဂစ်ဒိုင်ယာရီ (၄) သန်းစိုးလှိုင် ဧပြီ ၄၊ ၂၀၀၉ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရပြီးခါစ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ စံပြရပ်ကွက် ဧရာဝတီတိုင်းမှ ရင်နင့်ဖွယ်ရာများ ရန်ကုန်မြို့နေလူထုမှာ ကိုယ့်ဒုက္ခနှင့်ကိုယ် နပမ်းလုံးနေခိုက် လူပေါင်း ၂ သန်းမျှ နေထိုင်သည့် ဧရာဝတီတိုင်း ရှိ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနေ လူထုမှာ မီးရဖို့ ရေရဖို့ ဆိုသည့်ကိစ္စများထက် အဆများစွာ ဆိုးဝါးသည့် သေရေးရှင်ရေး တမျှအခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ တသက်တွင် တကြိမ်မျှ မကြုံဘူးသည့် သဘာဝ ကပ်ဘေးကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ စပါးကျီဟု ခေါ်ဆိုသည့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ခါးစည်း ခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုကပ်ဘေးကြီးက သိန်းဂဏန်း၊ သန်းဂဏန်းနှင့် ချီသည့်လူများကို မိသားစု ဆုံးရှုံးစေခြင်း၊ အိပ်မက်ဆိုးကြီးတခုကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့စေခြင်းတို့ သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ဟိုင်းကြီးကျွန်းမှ...
> ကမာပုလဲနှင့် ဂျီတော့ပေါ်မှာ စကားပြောခြင်း သစ်ကောင်းအိမ် ဧပြီ ၃၊ ၂၀၀၉ တကယ်တော့ ပစ်စရာဆိုလို့ ကျည်ဆံတတောင့်မှ မကျန်တော့တဲ့ နေ့မှာ ကိုယ့််အပေါ်ကျရောက်လာမယ့် စီရင်ချက်တရပ်ကိုပဲ သေသေသပ်သပ် စောင့်ကြည့်နေရုံသာ။ အီိရတ်က စစ်တပ်တွေ ရုတ်မယ် ရုတ်မယ်နဲ့ တကယ်မရုတ်ဖြစ်သေးဘူး ငါ့ဘ၀ထဲ မင်းဆုတ်ခွာသွားပုံကတော့ တကယ့်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်။ ကမာပုလဲ… ကမာပုလဲ……တဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကဗျာဆရာကမာပုလဲက အော်ပြောတယ်။ မင်းက အမေရိကန်သမ္မတတွေထက် ပိုရက်စက်တဲ့ မိန်းမ….. ဘဂ္ဂဒက်မြို့ပျက်ကြီးတောင် ငါ့နှလုံးသား လောင်ကျွမ်းမှုရဲ့ အပျက်စီး အဆုးံအရှုံးတွေကို လိုက်မမီတော့ပါဘူးကွာ တဲ။့ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး လေတိုးသွားလို့ ငါ့ခန်းစီးစတွေ လှုပ်ခါကျန်ရစ်တာပါ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး ပန်းတပွင့်နဲ့ ခလုတ်တိုက်လဲမိတာပ။ါ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ရေပြောင်း မြေပြောင်းမို့ ဖျားချင်...
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၃၃)ကြေးမုံဦးသောင်း သို့မဟုတ် သံမဏိ သတင်းစာဆရာထိန်လင်းဧပြီ ၃၊ ၂၀၀၉ အခုလ ၃ ရက်နေ့ဆိုရင် ဆရာကြေးမုံဦးသောင်း ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ၁ နှစ် ပြည့်ပါပြီ။ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဆရာဦးသောင်းဟာ သူ့ဘဝ နောက်ဆုံးအချိန်တွေထိ စာပေရေးသားခြင်း၊ ရေဒီယို အသံလွှင့်ဆွေးနွေးခန်းများမှာ ပါဝင်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ မနေဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့က ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာ မနေဖြစ်တဲ့အပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပေမယ့် ဆရာဦးသောင်းတို့လို ပြည်ပရောက်နေတဲ့ ဆရာကြီးတွေနဲ့ သိကျွမ်းတွေ့ဆုံခွင့်တွေ ရခဲ့တဲ့အတွက် ကံကောင်းတယ်လို့ ဖြေသာရပါတယ်။ ဆရာနဲ့ ဆုံခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေဟာ အသက် ၈ဝ အရွယ် ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းတော့တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပေမယ့် ဆရာ့ကို အမြဲတမ်း...
>Maung Swan Yi – Soe Win Maung, Father of ThanKhe
> သံခဲတို့ အဖေ မောင်စွမ်းရည် ဧပြီ ၃၊ ၂၀၀၉ သံခဲတို့၊ သံဒုတ်တို့ နာမည်တွေကို ဖတ်ရ၊ ကြားရတိုင်း သူတို့အဖေ ကိုစိုးဝင်းမောင်ကို သတိရမိတယ်။ “သြော်— သံခဲတို့အဖေ ကံနည်းလို့ သေရှာခဲ့ပါပလော …” လို့လည်း စိတ်ထဲမှာ မြည်ကြွေးမိပါတယ်။ ထိုင်း-ဗမာ နယ်စပ်က သူပုန်လေးတွေနဲ့ ဖြစ်ကြတဲ့ သံခဲတို့ သံဒုတ်တို့ကို သွားရောက်နှုတ်ဆက် အားပေးချင်တယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲကပဲ ရှိပြီး သူတို့ဆီကို သွားမယ် သွားမယ်နဲ့ ကြံရွယ်နေခဲ့တာ ၅ နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ ပါပြီ။ ကျနော် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ပြီး သူတို့တတွေ နယ်စပ်မှာ ရှိနေကြတယ်လို့ ကြားကတည်းကပါပဲ။ သံခဲကိုတော့ သူက ခရီးယာယီများသူမို့ ပြည်ပရောက်လေရာမှာ တွေ့ရတတ်ပါရဲ့။ သံဒုတ်ကိုတော့ ထိုင်းဗမာ...
>NLD Youth continued Reading Discussion Forum
> အင်န်အယ်ဒီလူငယ်များ စာဖတ်ဝိုင်းဆက် မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဧပြီ ၂၊ ၂၀၀၉ ယနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အင်န်အယ်ဒီပါတီ ရုံးချုပ်တွင် လူငယ်များ၏ စာဖတ်ဝိုင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းစာဖတ်ဝိုင်းတွင် ရနံသစ်မဂ္ဂဇင်းတွင်ပါဝင်သော အမေရိကန်သမ္မတသစ် အိုဘားမားအကြောင်း ဆောင်းပါးများကို ဆွေးနွေးကြသည်ဟု ဆိုသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Hlaing – Human
> ‘လူ’ လှိုင် ဧပြီ ၂၊ ၂၀၀၉ အရိပ်က သူ့အရိပ်ကို လန့်ခုန်တယ်။ အိပ်မက်က အိပ်ဆေးတွေသောက်လို့ ငုတ်တုတ်။ လူဟာ ပျောက်သွား သူ့မျက်လုံးအစုံကို ကပ်သုံးပါးထဲ ရှာဖွေဆဲ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> ရခိုင်ဒေသမှ ဘင်္ဂါလီ သို့မဟုတ် ရိုဟင်ဂျာများ ဓာတ်ပုံအက်ဆေးဝင်းမြတ်ဧပြီ ၂၊ ၂၀၀၉ မကြာသေးမီ လများအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်မှ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေသူ အများအပြားသည် ပင်လယ်ခရီးကို စွန့်စား ဖြတ်သန်းပြီး နေရပ်ကို စွန့်ခွာခဲ့ကြသည်။ ထောင် နှင့် ချီ ရှိသော လှေစီးခရီးသည်များသည် ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက် သောင်တင်ကြသောအခါ ၎င်းတို့၏ အကြောင်းက ကမ္ဘာ့သတင်း မျက်နှာစာတွင် နေရာယူလာကြသည်။ ၎င်းတို့ကို မြန်မာပြည်မှ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများဟု ဖော်ပြကြသည်။ မြန်မာအစိုးရက မြန်မာပြည်တွင်ရှိသော တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့် လူမျိုးများ မပါရှိကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထား...
>Cartoon Naryi – Burmese "G"
> ကာတွန်း နာရီ – မြန်မာပြည်က “ဂျီ” များအကြောင်း ဧပြီ ၁၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Chosaint – Zero Poem
> သုညထဲက ညလက်လက် ချိုစိမ့် ဧပြီ ၁၊ ၂၀၀၉ နှင်းတောထဲမှာ ငါ … ပန်းပင်လေးတွေ စိုက်တယ်။ အပင်ဖြစ်စ ပန်းပင် ငှက်ကလေးတွေ ထိုးဆိတ်တယ်။ သေကြရှာပါ့ကုန် ငါ … ထပ် စိုက်တယ် ငှက် ဆိတ် ဒီ သံသရာ ငါ … မညည်းဘူး။ ကုန်သွားတဲ့ မနေ့ကတွေကို ငါ … လက်ပန်းမကျခဲ့ဘူး။ မနေ့ညက ကောင်းကင်မှာ ခရမ်းပြာ ကြယ်ပွင့် လက်တယ်။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> မြန်နှုန်းနိမ့်အင်တာနက်ကြောင့် မြန်မာပြည်မှ လုပ်ငန်းရှင်များထိခိုက်AP သတင်းဌာနဧပြီ ၁၊ ၂၀၀၉ မြန်မာပြည်တွင် အင်တာနက် မြန်နှုန်း နိမ့်လွန်းသဖြင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်း ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ အထူး ထိခိုက်ပြီး အင်တာနက် ကဖေးများတွင်လည်း ဖောက်သည်များ လျော့နည်းသွားသည်။အင်တာနက် မြန်နှုန်း နှေးကွေးလွန်းရခြင်းမှာ ပြင်ဆင် မွမ်းမံနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း စစ်အစိုးရက ယနေ့ ဆင်ခြေပေးလိုက်သည်။ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်ရေအောက်ရှိ နိုင်ငံတကာ ကေဘယ်လ်ကြိုး ပြုပြင်မှုမှာ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ စတင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ပြင်ဆင်မှုမှာ မတ်လ ၂၅ တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာတယ်လီပို့ ဟု ထင်ရှားသည့် အစိုးရပိုင် အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းက ကြေညာထားသည်။ သို့သော်လည်း အခက်အခဲများကြောင့်...
>Burmese Journal Digest – March 31, 2009
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ မတ် ၃၁၊ ၂၀၀၉ ကျိုက်ထီးရိုးက ဂမုန်းများ တရုတ်က အ၀ယ်လိုက်။ စာရေး ဆရာ၊ ဗိန္ဒော ဆောင်းပါးရှင် သာဂဒိုး ဇနီးသည် ဒေါ်တင်တင်အေး (၇၈ နှစ်) ကွယ်လွန်။ လျှပ်စစ်မီး အလှည့်ကျ ပေးဝေခြင်း မပြောင်းလဲသေး။ သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးခင်မောင်လေး၊ ဖိုးသောကြာ (ခေတ်+မိုး) ကိုယ်ရေးအကျဉ်း။ ရွှေတိဂုံ စေတီတော် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူမှု မတ်လကုန်တွင် ပြီးစီ်းမည်။ မရမ်းတလင်း တောတွင် လူအရိုးစုများ တွေ့။ မန္တလေး အထွေထွေ ရောဂါကု ဆေးရုံ အလှူရှင်များ အလှူဖြင့် ၅ ထပ် အဆောင်သစ်ဖွင့်။ ရန်ကုန်...
> အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများ ဧပြီ ၃ ရက်အထိ ဆက်လက်နှေးကွေးမည် ၀င်းမြတ် မတ် ၃၁၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်၊ မတ် ၃၁ – အင်တာဆက်သွယ်မှုများ ဧပြီ ၃ ရက်နေ့အထိ ဆက်လက် နှေးကွေးနေမည်ဖြစ်သည်ဟု မတ် ၃၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာတယ်လီပို့မှ ထပ်မံကြေငြာလိုက်သည်။ ပင်လယ်ရေအောက်မှ ဆက်သွယ်ထားသော အင်တာနက်ဆက်ကြောင်းအား မတ်၂၁ ရက်နေ့မှ စတင်ပြုပြင်ခဲ့ပြီး မတ်၂၅ နေ့အထိ အင်တာနက်လိုင်းများ နှေးကွေးနေမည်ဟု ကနဦး သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့အထိ နှေးကွေးမည်ဟု ထပ်မံ ကြေငြာခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ ဧပြီ ၃ရက်အထိ ကြာမြင့်မည်ဟု တိုးမြှင့်ကြေငြာ ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ “ပထမက ၂၅ ရက်နေ့အထိ နှေးမယ်ဆိုပြီး ၁...
>Electricity in Rangoon with quota –5hoursaweek atleast, residence said
> ရန်ကုန်မြို့တွင်း မီးပေးဝေမှုကို စကြ်ာပုံဇယားကွက်ဖြင့် တွက်ချက်နိုင်ပြီ မြို့သူ မြို့သားတို့ မျက်စိလည်သော်လည်း အနည်းဆုံး တပတ်လျင် မီး ၅ နာရီရ ဟုဆို မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) မတ် ၃၁၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မြိ့တော်အား လျှပ်စစ်ပေးဝေမှုကို ဇုန် ၄ ဇုန်ခွဲခြားပြီး ပေးဝေနေကြောင်း ခွဲတမ်းအချိန်စာရင်းကို ၂၄ ပစ္စည်းရှင်းသည့် စကြာပုံသဏ္ဍာန်ဇယားကွက်နှင့် ရှင်းလင်းထားကြောင်း ပြည်တွင်းဂျာနယ်များတွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြို့ပြင်ရပ်ကွက်များကို က၊ ခ၊ H ဟူ၍၎င်း၊ မြို့တွင်းရပ်ကွက်များကို A,B,C,H အုပ်စုများဖြင့်၎င်း ခွဲခြားထားပြီး နေ့များခွဲကာ မီးများ ဖြန့်ဝေပေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။ မီးရသည့်အချိန်မှာ ညနေ ၅ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီ...
> မတ်လ စာကိုး စကားကိုးမတ် ၃၁၊ ၂၀၀၉ “ – – ရေဒီယိုက လျှပ်စစ်မီး မလာလဲ ဖွင့်လို့ရတယ်။ အသံလွှင့်ဌာတွေလဲ တိုးလာတဲ့အတွက် အရင်ကထက် အရောင်းလိုက်လာတယ်။ နယ်ဘက်ကတော့ ဈေးသက်သာပြီး ဓာတ်ခဲအကြီး သုံးလို့ရတဲ့ ORCHID အမျိုးအစားကို ပိုဝယ်ကြတယ်။ ရန်ကုန်ဘက်က လိုင်း ပိုမိပြီး အရည်အသွေး ကောင်းတာကို ရွေးဝယ်ကြတယ်။ တန်ဖိုးကြီးတော့ လိုင်း ပိုမိတာပေါ့။ မန်မိုရီ မှတ်လို့ ရတဲ့ အမျိုးအစားကို ကြိုက်ကြတယ်။ အဓိကကတော့ လိုင်းတွေ အကုန်မိလား လို့ မေးကြတာ များတယ် – – ”အရောင်းဝန်ထမ်းတဦး၊ စိန်ကောင်းစတိုး၊ ရန်ကုန်FLOWER NEWS ဂျာနယ်၊ မတ် ၁၀ “...
> စာရေးဆရာ မောင်သာရ ဆေးရုံတွင် နှလုံးအကူစက် ခွဲစိတ်တပ်ဆင်ရ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ မတ် ၃၁၊ ၂၀၀၉ အမေရိကန်ပြည်၊ နဗားဒါးပြည်နယ်တွင် ရောက်ရှိနေသည့် စာရေးဆရာကြီး မောင်သာရ နှလုံးရောဂါအခြေအနေကြောင့် ၎င်းနေထိုင်ရာအရပ်ရှိ ဆောက်သ်သန်ဟီလ် (Southern Hill) ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသည်ဟု ကြားသိရသည်။ နှလုံးအကူစက် (Peace Maker) ကို ခွဲစိတ်ပြီး တပ်ဆင်ထားရသည်ဟု ဆိုသည်။ ယခု အသက် ၈၀ နားနီးနေပြီဖြစ်သည့် မြန်မာပြည်၏ နံမည်ကျော် ဘ၀သရုပ်ဖော်စာရေးဆရာကြီးတဦးဖြစ်သူ မောင်သာရသည် ၁၉၉၉ တွင် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကတည်းက ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်များကြောင့် စစ်အစိုးရက စာရေးသားခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်ဟု...
> ကွန်ပျူတာများကိုခြိမ်းခြောက်နေသည့် `ကွန်ဖစ်ကာ´(Conficker) ပိုး တင့်လွင် မတ် ၃၁၊ ၂၀၀၉ အရူးလုပ်ခံရမယ့် ဧပြီ တစ် လာမယ့် ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ (ဧပြီဖူးလ် April Fool) နေ့မှာ အင်တာနက်ပေါ်မှ တဆင့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ကွန်ပျူတာများကို ကွန်ဖစ်ကာ ဗိုင်းရပ်စ်က ဒုက္ခပေးမယ်လို့ ကွန်ပျူတာ ဟက်ကာတွေက ရာဇသံပေး ထားပါတယ်။ ထိုရာဇသံကြောင့်ရော ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း၊ လပိုင်းတွေမှာ `ကွန်ဖစ်ကာ´ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်နဲ့ အချက်အလက်တွေ ခိုးယူခံရပြီး ဘဏ်ထဲမှ ငွေဆုံးရှုံးမှုများ ရှိခဲ့တာကြောင့်ပါ စိုးရိမ်မှုတွေ ပိုမို တိုးပွားလာနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ `ကွန်ဖစ်ကာ´ ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာ ပိုး(worm) ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အကုန် နိုဝင်ဘာလမှ...
> ၂၀၁၀ မှာ ရိုဟင်ဂျာ(သို့) ဘင်္ဂါလီတွေ မဲပေးခွင့်ရှိမှာလား ၀င်းမြတ် မတ် ၃၁၊ ၂၀၀၉ နာဇီရွာ ဈေး နာဇီရွာဈေးရှေ့မှာ လဖက်ရည်သောက်ရင်း ခရီးသည် စောင့်နေတဲ့ ယာဉ်မောင်း မောင်ဖြူ(၄၅ နှစ်) က ခွက်ထဲကျန်နေတဲ့ လဖက်ရည်ကို အကုန်မော့သောက်လိုက်တယ်။ “အလုပ်ကအရင်ကလို မကောင်းတော့ မိသားစု စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ဖို့ မနည်းရှာရတယ်” လို့ မြန်မာစကားကို လေသံ ၀ဲဝဲနဲ့ မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီးပြောတယ်။ သူထိုင်နေတဲ့ လဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့သူအများစုက ရခိုင်စကားနဲ့ ဘင်္ဂါလီစကားကိုသာ အများဆုံး ပြောဆိုကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာစကားကို အနည်းငယ်သာ ပြောဆိုနိုင်ကြတယ်။ သည်လဖက်ရည်ဆိုင်ရှိတဲ့ နာဇီကျေးရွာမှာ မွတ်စလင် ဘာသာဝင်တွေ အများစုနေထိုင်ပြီး စစ်တွေမြို့ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ တည်ရှိ ပါတယ်။...
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၂၉)ရာပြည့် ခေတ်စမ်းစာဆို ဆရာမောင်ထင် ထိန်လင်းမတ် ၃၀၊ ၂၀၀၉ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ဟာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်နဲ့ စာဆိုကြီး ဆရာမင်းသုဝဏ်တို့ရဲ့ ရာပြည့်နှစ် ဖြစ်သလို ဘိုးသက်ရှည်လို့ ပြောရလောက်အောင် အသက် ၉၇ နှစ်အထိ နေထိုင်သွားတဲ့ ဆရာကြီး မောင်ထင်ရဲ့ ရာပြည့်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ “ယနေ့ခေတ် ပညာရေးသည် ဦးကြော့ ရေးသည့် စုံနံ့သာမြိုင် ရှာပုံတော်ကြီးမှ မင်းသမီး လင်ပျောက်ရှာနေသည်နှင့် တူသည်” လို့ အစချီပြီး ရေးသားခဲ့တဲ့ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း ထဲက ‘ကမောက်ကမ ပညာရေး’ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိကတည်းက ဆရာမောင်ထင်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိသွားပါတယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို ဝေဖန်ရေးသားရဲတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ထိထိမိမိ...
> လိုအပ်နေတဲ့ ကောင်းကင် ချိုဆိမ့် မတ် ၃၀၊ ၂၀၀၉ ရှေ့မှာ ကမ်းပါး နောက်မှာ ကျား ဒီဘဝမျိုးမှာ နေခဲ့ရတာပါ။ နေမသာတဲ့ ကောင်းကင် မှုန်မည်းကြီး … လမသာတဲ့ ကောင်းကင် မဲနက်နက် … လထွက်တဲ့ ညဆိုရင် ကောင်းကင်က စိမ်းလို့ ပြာလို့ လွှတ်လှ။ ရေခဲနေတဲ့ စမ်းချောင်းပေါ် အပြာရောင် တောပန်းကလေး သွားပစ်ချတယ် … ဆရာပွင့် ပြောသလို ကောင်းကင် ပြာပြာလွင်လွင် အပျော်ဦးတင် မော်ဖူးချင်လှပါပြီ ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> သူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာ ကြည်အောင်မောင်စွမ်းရည်မတ် ၃ဝ၊ ၂၀၀၉ သူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာ ကြည်အောင် ကွယ်လွန်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်း ဟာ ၂ဝဝ၉ မတ် ၂၇ ရက်မှာ နော်ဝေက ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံက မောင်ဘုန်းမြတ်က လှမ်းပြောလို့ ကြားသိလိုက်ရတော့ ချက်ချင်း စကား ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ သူ့ကို ဆေးရုံတင်ထားတယ် ဆိုတာတော့ သတင်း ရထားပါတယ်။ ကျနော်ကလဲ ခေတ်ပြိုင်ကို ပို့ထားတဲ့ ‘ဦးသန့်နဲ့ဆေးလိပ်’ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှာ ကျောင်းသား ဘဝက အတူ အိပ်၊ အတူ စားခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲက ဆေးလိပ် အလွန် အကျွံသောက်ကြတဲ့ တင်မိုး၊ ကိုကိုးကျွန်းလေးမောင်၊ ညွန့်အေး (အင်းဝ) တို့ ကွယ်လွန်ကုန်ကြပြီး ကြည်အောင်ပဲ...
> ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကျောင်း မီးရှို့ခံရကရင်သတင်းစဉ်မတ် ၃၀၊ ၂၀၀၉ မဲဆောက်မြို့တောင်ဘက် ၄၄ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးရှိ ဖုတ်ဖရမြို့နယ်မှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ စာသင်ကျောင်း တကျောင်းကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များက မတ်လ ၂၈ရက်နေ့က မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထိုသို့ ကျောင်းမီးရှို့ခြင်းကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့သူ ဦးမိုးကြိုးက “မနက် ၁ဝနာရီလောက်မှာ ထိုင်း နယ်ခြားစောင့်တပ်က စစ်သား ၁ဝဦး ရောက်လာပြီး စာသင်ကျောင်းထဲက စာရေးကိရိယာတွေနဲ့ ထိုင်ခုံတွေကို ဖျက်ဆီးသွားပါတယ်။ ကျောင်းက အုတ်နဲ့ ဆောက်ထားတော့ မီးမစွဲပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းကိုပြန်ပြင်ဖို့ထားထားတဲ့ သက်ကယ်တွေကိုပါ မီးလောင်သွားတယ်”ဟု ကရင်သတင်း စဉ်ကို ပြောသည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ တရာကျော်နှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ ၆ဦးရှိသည့် အဆိုပါမူလတန်းကျောင်းကို အမျိုးသား လုံခြံရေးအရ ဖျက်ဆီးရခြင်းဖြစ်ပြီး...
> မတ်လ ၂၉၊ ၂၀၀၉ မိုးမခရေဒီယို ဆစ်ဒနီ တနင်္ဂနွေနေ့ အစီအစဉ် ရွက်ဝါ – ကိုမင်းနောင် သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ တပ်မတော်သူရဲကောင်း ၇ ဦး – ဧရာဝတီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကဗျာသဘောထား – မိုးမခ ကဗျာဆရာကြည်အောင် ကွယ်လွယ်ခြင်း အမှတ်တရ – မိုးမခ၊ မောင်စွမ်းရည် သတင်းတိုထွာ ဒုတိယပိုင်း ပါပါလေးတို့ လာချေပြီ – ဒီဗီဘီ အာဇာနည်မိခင် ယုဝတီကြည်ဦး ဂုဏ်ပြု – မိုးမခ၊ ထိန်လင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အလှ တေးရသ အထူးကဏ္ဍ – ဗိုလ်အောင်ဒင် (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း၊ ကော်လိပ်ဂျင်နေ၀င်း၊ တင်တင်ျွဲ့၊ မောင်ကြေးမုံ၊ ) စီစဉ်သူ – ဦးပန်တျာ၊ မေရီ...
> စစ်အစိုးရ၏ ဒုတိယအကြိမ် ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၀ အငြင်းပွားသော စာတမ်းများ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ မတ် ၂၉၊ ၂၀၀၉ ယခင်အပတ် မတ်လ ၂၄ ရက်ဝန်းကျင်က အင်တာနက်ဘလောက်များတွင် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခဲ့သော မြန်မာပြည် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက်စာတမ်းကို မိမိရေးသားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ပြည်တွင်းက ဝေ့ဗ်စ် မဂ္ဂဇင်းတာဝန်ခံ၊ စာရေးဆရာ ကျော်ဝင်းက တရားဝင် စာရေးသားပြီး ငြင်းဆိုသည်စာကို အင်တာနက်အီးမေးများက တဆင့် ဖြန့်ချိလိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုနိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်စာတမ်းမှာ အင်္ဂလိပ်လို ကျော်ဝင်းက ရေးသားသည်ဟု ဆိုပြီး မြန်မာဘာသာဖြင့် ကျော်လင်းဦးက ဘာသာပြန်ဆိုကာ မြန်မာဖရီးဒမ်းနယူးစ်ဂရုပ်နှင့် ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့ဂ် တို့တွင် ပြန်လည် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်...
> အမိမြေအိမ်သီ (သာယာဝတီ)မတ် ၂၉၊ ၂၀၀၉ ရင်ထဲအမြဲ ထာဝရသိမ်းဆည်းထားမွန်းကြပ်လာတိုင်းပို ပို သတိတရ နဲ့လွမ်း .. တခါ တရံမတူတဲ့သူတွေကြားကြိုးစား ပမ်းစားထုတ် ထုတ်ပြီး ကြွား .. တပါးသူ ရဲ့ သယံဇာတတွေထဲစီးမျောနေပေမဲ့ ဒီနေ့အထိသူနဲ့ကြီးပြင်းနေတုန်းပဲ……….။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> မြန်မာ နဲ့ အာရှရဲ့ ရေအဆိပ်သင့်မှု ကျော်ကျော် မတ် ၂၈၊ ၂ဝဝ၉ ဆက်စပ် ကြည့်ရှုရန် ဗီဒီယို မှတ်တမ်းကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့၏ မြန်ပြည်နှင့် သောက်သုံးရေ အခြေအနေ တောင်အာရှဒေသက လူသန်းပေါင်း ၁၄ဝ ကျော်တို့ဟာ arsenic ခေါ် ဓာတုစိန် အဆိပ် သင့်နေတဲ့ ရေကို နေ့စဉ် သောက်သုံးနေကြပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ကမ္ဗောဒီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ နဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့မှ လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာ ဓာတုစိန် အဆိပ်သင့်ပြီး ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သေဆုံးနေရပါတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း(WHO) က ထုတ်ဖော်ထားပါတယ်။ သမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံးသော အဆိပ်သင့်မှုလို့ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များက သတ်မှတ်ကြပါတယ်။...
> ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ် အမှတ်(၂၇ဝ) ရွှေပြည်အေးရဲ့ ရွှေမန်းမေမာမာအေး မတ် ၂၉၊ ၂၀၀၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတဝါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ အရင်တပါတ်က ရွှေမန်းမေ တဝက်တပျက်မို့ ဆက်ကြ ဦးစို့နော်။ (ပျော်ပွဲတွေ ရွှင်ပွဲတွေ ဝင်နွှဲပြီး ကြဲမယ်လေ၊ ဘုရားတွေ မနားမနေ၊ မေသွားရင် အပျင်းကိုဖြေ)x၂ ထူးလှတဲ့ မန်းမြို့အချေ၊ မြူးကြွဘွယ့် ဆန်းလိုတွေ ဘာဘာညာညာစုံနေ၊ သာယာသာယာပုံတွေ၊ မြောစမှတ်တောင်တွင်ပါသလေ၊ အတောမသတ်အောင် ရွှင်ကာနေ (ရွှေမန်းမေ)၃x နန်းထိုက်တဲ့ (ရွှေမန်းမေ)၂x ရွှေမန်း – ရွှေမန်းမေ xxxx ...
> ကျားဖမ်းသူ ရွှေဘိုမြင်း ဦးညွတ်ခြင်း အောင်ဝေး၊ မောင်လွမ်းဏီ၊ သစ်ကောင်းအိမ် မတ် ၂၈၊ ၂၀၀၉ ကျားဖမ်းသူသို့ တမ်းချင်း အောင်ဝေး ကိုလွမ်းဏီရေ… ငို စမ်း ဒီနွေ အို…လွမ်းပြီလေ။ အမေက မွေး ပေးတဲ့ နာမည် ကြည်လင်။ ပြည်သူကကျွေး ပေးတဲ့ နာမည် ကြည်အောင်။ အနာဂတ်ကို လှုပ်နှိုးး ချစ်သူကို ကျောပိုး (မျှစ်မချိူးခင်) ကျားဆိုးပေါတဲ့တောင်ရိုးမှာ ဆရာဟာ ဓားကို ထမ်းလို့ကျားဆိုး အရင်ဖမ်းခဲ့ပြီ။ ။ ရဲဘော်တပည့် - အောင်ဝေး (မတ် ၂၈ ၊ ၂၀၀၉) ရွှေဘိုမြင်းကို ကျုပ်တို့ပိုင်တယ် မောင်လွမ်းဏီ “ဇော်ဂျီက ဂေါ်ကီ...
> ဂျပန်ခေတ် တံဆိပ်ခေါင်းများဦးအုန်းကျော် မတ် ၂၈၊ ၂၀၀၉ “ဂျပန်တွေ တို့ပြည်ကို ၁၉၄၂ ကနေ ၁၉၄၅ အထိ ၃ နှစ်လောက် အုပ်ချုပ်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီ ၃ နှစ်အတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းတွေအကြောင်း မင်းကို ဦးလေး ပြောပြရဦးမယ်” “အခုလက မတ်လ ဆိုတော့ ဂျပန်တော်လှန်ရေးကို သတိရစရာပေါ့နော်” အပြည့်အစုံသို့ No tags for this post. Related posts No related posts.
> ပုဂံလက်သစ် ဘုရားစေတီအထွတ်များ ရန်ဝင်း (တောင်တံခါး)မတ် ၂၈၊ ၂၀၀၉ ပုဂံဘုရားတွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ မူလက ဘာရှိခဲ့သလဲ။ ထီးလား အထွတ်လား၊ ကွန်းတောင်ရဲ့ အထက်စေတီက ဘယ်လိုပုံစံများ ရှိခဲ့မလဲလို့ သိချင်တဲ့သူ တော်တော်ပဲ များလိမ့်မယ်။ အပြည့်အစုံသို့ No tags for this post. Related posts No related posts.
> ကိုကည်လင်နဲႛ ကဵနော် ဖိုးသံ (လူထု) ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ုကည်လင်ဆိုတာက သူႛအိမ်နာမည်၊ ကေဵာင်းနာမည်၊ ကဵနော်တိုႛခေၞတဲ့နာမည်။ုကည်အောင်ဆိုတာက သူႛကလောင် နာမည်၊ စာပေဗိမာန်ကဗဵာဆုရတဲ့နာမည်။ သူႛနာမည်နဲႛ ပတ်သက်လိုႛေူပာစမတ်ြအူဖစ်အပဵက်တခုကိုကားဖူးသူမဵာုးကားဖူုးကပၝလိမ့်မယ်။ တက္ကသိုလ်ကေဵာင်းသားဘ၀ အခဵင်းခဵင်းတြေ တခၝဆုံကတုန်း လူငယ်တိုႛဘာသာဘာဝ ပေဵာ်ုက နောက်ုကရင်း ကဗဵာဆရာတင်မိုးက “တင်မိုး-ဗင်ဂိုး”လိုႛ ရေကြးေုက်ာလိုက်ပၝသတဲ့။ ဒီအခၝမြာ ကိုကည်လင်ကလည်း ခဵက်ူခင်းဆိုသလိုအညံ့မခံဘဲ “ုကည်လင်-လီနင်ကြ” လိုႛူပန်ရေကြးေုက်ာလိုက်လိုႛ မတ်ြမတ်ြရရေူပာစရာ အူဖစ်အပဵက်ကလေးတခုအူဖစ် အပေၝင်းအသင်းမဵား အုကားမြာ ကဵန်ရစ်ပၝတယ်။ အဲဒၝ သူႛနာမည်ရင်းပၝ။ အူပည့်အစုံသိုႛ … No tags for this post. Related posts No...
Page 826 of 902«1...824825826827828...902»